रामचन्द्र पौडेलको ‘कांग्रेस शुद्धीकरण जागरण अभियान’ मा आर्थिक लगानी गर्नेको खोजी – Medianp
रामचन्द्र पौडेलको ‘कांग्रेस शुद्धीकरण जागरण अभियान’ मा आर्थिक लगानी गर्नेको खोजी
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ ०१, २०७५१२:५५0
काठमाडौं, १ जेठ । नेपाल कांग्रेस यतिखेर आन्तरिक द्वन्द्वमा रुमल्लिन पुगेको छ । सुरुदेखि नै दुई गुटमा रहँदै आएको कांग्रेसमा अहिले सतहमै तीन गुट स्पष्ट देखिएको छ । आगामी १४औं महाधिवेशनसम्म यी तीन गुट कायमै रहने भएको छ ।
सुशील कोइरालाको निधनपछि कोइराला समूहको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलले गर्दै आएका थिए । तर, पदाधिकारी मनोनयनमा महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई साथ दिनु, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव बैठकमै उपस्थित नहुनुले कोइराला समूह पौडेलको हातबाट फुत्किने सम्भावना धेरै देखिएको छ । सोही कारण यतिखेर नेता रामचन्द्र पौडेल कांग्रेस शुद्धीकरण अभियान भन्दै जिल्ला दौडाहमा निस्केका छन् ।
पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेल युवा जागरण अभियान भन्दै देश दौडाहमा छन् । संघीय राजधानी काठमाडौंका अलवा उनले हरेक प्रदेशको राजधानीमा युवा जागरण अभियानको कार्यालय नै स्थापना गरेको उनका निकटस्थहरू बताउँछन् । आफ्नो गृहजिल्ला तनहुँमा जाँदासमेत गाडी भाडा माग्न सभापतिकहाँ पुग्ने रामचन्द्रका छोरा चिन्तनले आफ्नै पैसामा यस्तो अभियान सुरु गरे होलान् भन्ने कांग्रेस नेताहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । अझ नेता पौडेलले सुरु गरेको ‘कांग्रेस शुद्धीकरण जागरण अभियान’ मा कसको लगानी छ ? भन्ने खोजी सुरु भएको छ ।
सुशील कोइराला सभापति हुँदा पौडेल उपसभापति थिए । उपसभापति पार्टीको प्रशिक्षण विभाग प्रमुख हुने भएकाले पौडेलले १३औं महाधिवेशनसम्म आफ्नो गुट विस्तार गर्न सबै जिल्लामा प्रशिक्षण चलाएका थिए । तर, अहिले पार्टी उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि मनोनयन भएका छन् । सोही नेता पौडेल ‘कांग्रेस शुद्धीकरण जागरण अभियान’ लिएर जिल्ला दौडाहमा लागेको बताइन्छ । उनलाई छोरा चिन्तनले १४औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै युवा अभियान चलाएका छन् । पौडेल १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्ने मनस्थितिमा छन् ।
पौडेल बाबु–छोराले सुरु गरेको अभियानमा सरकारमै रहेको एउटा दलले आर्थिक लगानी गरेको स्रोतले बताएको छ । पार्टी सभापति देउवालाई कमजोर पार्ने अभियानमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली खुलेर लागेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । ओली र कांग्रेस नेता पौडेलबीच निकै हार्दिक सम्बन्ध छ । सोही कारण कांग्रेसमा पौडेललाई सत्तारुढ दलबाटै आर्थिक सहयोग भइरहेकाले यही घटनाले कांग्रेस फुट्न पनि सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
तरुण दल, नेविसंघ, महिला संघमा विवाद निकालिनु र समानान्तर गतिविधि बढिरहेकाले कांग्रेस विभाजनको दिशामा अघि बढेको र पौडेलले यसको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । पौडेललाई अहिले प्रकाशमान सिंह, डा.रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसीलगायतले साथ दिएका छन् । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने आफू बलियो हुन पौडेलको सहारा लिन थालेका छन् ।कोइराला परिवारको एक नेताका अनुसार आफ्नो सक्रियकालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले रामचन्द्र पौडेलको विषयमा टिप्पणी गर्दै भन्ने गर्थे– ‘तनहुँ जाँदासमेत भाडा माग्न सधैं मैकहाँ आउँछन्, यस्ता मान्छेले पार्टी चलाउलान् भनेर कसरी भरोसा गर्नू ।’ तर, अहिले नेता पौडेलले कांग्रेस शुद्धीकरण अभियानमा खुलेर खर्च गर्न थालेका छन् ।
गत महाधिवेशनमा पौडेल देउवाका मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए । पौडेलले हारेकै कारण देउवाले सभापति पदमा चुनाव जितेका हुन् । पराजित सभापतिले अर्को महाधिवेशनका लागि तयारी गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । आफ्नो प्रतिस्पर्धीको कमजोरी कार्यकर्ताबीच औंल्याउनुलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन । पार्टीको यो पराजयको जिम्मेवार सभापति देउवा हुन् भन्ने कुरा कार्यकर्तामा स्थापति गराए मात्रै पौडेलले अर्को महाधिवेशनमा देउवालाई परास्त गर्न सक्छन् ।
सहकर्मी महिलालाई समान पारिश्रमिक नदिने फिल्ममा काम नगर्ने हलिउड अभिनेता बेनेडिक्टको घोषणा
को हुन् यी युवती ? जसले इन्टरनेटमा मच्चाइन
चितवनमा विपीन कार्कीले भेटे साँच्चिकैका ‘गोपी’, जो दैनिक आठ सय लिटर दूध उत्पादन गर्छन्
मोटरसाइकलमा नयाँ मापदण्ड अनुसार नम्बर प्लेट राखिने